Libratone waxay ka dhigi doontaa laba ka mid ah kuwa ku hadla wireless-ka AirPlay 2 kuwo is waafajin kara | Wararka IPhone
Waxaan ku jirnaa bartamaha sanadka warka Apple-na wali waa la filayaa. Gaar ahaan waxa la hardware waxay ka dhigan tahay. Si kastaba ha noqotee, mid ka mid ah shaqooyinkii sida xiisaha leh loo sugayay ayaa ah suurtagalnimada in la isticmaali karo heerka cusub ee AirPlay 2. macruufka 11.4 iyo liiska qalabka sii kordhaya. Markii ugu dambeysay ee lagu dhawaaqo waa shirkadda Libratone.
Libratone waa shirkad bixisa ikhtiyaarro kala duwan markay tahay kuwa ku hadla wireless-ka. Xaaladdan oo kale, halyeeyada warkaan ayaa ah Libratone ZIPP y ZIPP mini. Labadan moodal, qiimo jaban ka AppleP HomePod, waxay ku heli doonaan heerka cusub iyada oo loo marayo cusbooneysiin software oo bilaash ah bilo yar gudahood.
Waxaan xasuusnaa in Sonos uu sidoo kale dhawaan sheegay in qaar ka mid ah moodelladooda sidoo kale lagu cusbooneysiin doono tikniyoolajiyadan bisha soo socota ee July. Moodooyinka ayaa ahaa Sonos One, Sonos PlayBase, iyo Sonos Ciyaar: 5. Waxaan sidoo kale ilaawin boodhka dhawaaqa Sonos Beam.
Hadda ah Libratone ZIPP iyo Libratone ZIPP mini ayaa heli doona heerkan maqalka iyo muuqaalka ah bisha Sebtember. Sidii aan soo sheegnay, waxaa lagu heli doonaa gebi ahaanba bilaash iyada oo la cusbooneysiinayo software. Maxaan ku samayn karnaa AirPlay 2 kumbuyuutarradeena? Hagaag, tusaale ahaan, hal aalad waxaan kasameyn karnaa maqal kumbuyuutaro kaladuwan ama maqallo kaladuwan kumbuyuutaro kaladuwan. Oo intaas oo dhan waxaa lagu xakameeyey iyada oo loo marayo qalabkeena sida iPhone, iPad, Apple TV ama moodooyinka ugu dambeeya ee jiilka Mac. Tani waxay ku siinaysaa tusaale ahaan.
Sidoo kale, liiska qalabka is waafajinaya ayaa horeyba u weynaa. Oo waxaad ka heli doontaa moodello ka socda noocyo caan ah sida Bang & Olufsen iyo BeoPlay-kooda; iyo waliba magacyada maqalka ee la aqoonsan yahay Maratz, Denon ama Bosewaa qaar ka mid ah magacyada ka kooban liistada dheer si loogu daro tikniyoolajiyaddan cusub ee Cupertino.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » Libratone waxay ka dhigi doontaa laba ka mid ah kuwa ku hadla wireless-ka AirPlay 2 kuwo iswaafajiya
Tim Cook wuxuu leeyahay shaqada fadhiga waa "kansarka cusub"